Xisbiyada mucaaradka iyo ceeymiska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
RÖDGRÖNT FÖRSLAG OM SJUKFÖRSÄKRINGEN
Xisbiyada mucaaradka iyo ceeymiska
Publicerat tisdag 19 januari 2010 kl 13.34
Ceeymiska qidmadda dadyoowga xannuunsan oo kor loo qaado iyo in aan aan la xadidin muddada ceeymiskaa, waxey ka mid ahaayeen fikir ay maanta oo salaasa ah ku daabaceen hogaamiyeyaasha saddexda xisbi ee mucaaradku, wargeeyska maalinlaha ee Dagens Nyheter.
Xisbiyada mucaaradka ayaa sheegey iney kor uga qaadi doonaan gaarsiinna doona 80% qidmadda uu qaato ruuxa jirada ku qoran, halka ay iminka ka tahey 75%. Sidoo kale in la gaarsiiyo toban, halka ay iminka ka tahay toddoba dhaqaalaha lagu qiimeeyo qidmaddaa, waxa loo yaqaano basbelopp.
Dadyoowga ka baxay ceeymiska muddadii ay xisbiyadda iminka maamulka dalka hayaa jireen, ayey xisbiyada mucaaradku sheegeen iney u suurtagelin doonaan sidii ceymiskaa dib loogu soo celin lahaa, waa haddii ay ku guuleeystaan awoodda dalka, iyo in loo suurtageliyo ruux walba in xaaladdiisa gaar loo eego, iyadoo hoowshaa lagu fulin doono wax ay ugu yeereen qasnadda maalgelinta ee dayactirka rehabiliteringsfond.
Haddii ay ku guuleeystaan xisbiyada mucaaradku doorashada dalka ka dhici doonta bisha Septeembar ee foodda innagu soo haysa ayaa sida ey sheegeen lagu sameeyn doonaa baaritaan hor leh xaaladda ceeymiska, iyadoona laga qeeyb gelin doono dhammaan xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka iyo dhinacyada suuqa shaqada.